ကားတစီးအဆွဲအရုန်းမကောင်းစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:06 PM | No မှတ်ချက် | သိန်း မြင့်
•••ကားတစီးအဆွဲအရုန်းမကောင်းစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါတယ် •••
အဲ့ဒီထဲကမှ *လေတံခါး (Throttle Body ) နဲ. *လေတံခါးဆင်ဆာ ( Throttle Position Sensor -TPS ) မကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ ကားရောဂါများကို ဗဟုသုတအနေနဲ.တင်ပြပေးပါမယ် ။ 🚪Throttle Body ( လေတံခါး ) 🚪လေတံခါးဆိုတာက
အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုအင်ဂျင် ( Internal Combustion Engine ) တွေ မီးလောင်ပေါက်ကွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ လေကိုထည့်သွင်းပေးရတဲ့ Intake System မှာအဓိက တာဝန်ထမ်းဆောင် နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် ။ 🚪Throttle
Body ( လေတံခါး ) ကို ယေဘူယျအားဖြင့် အင်တိတ်မီနီဖိုး ( Intake Manifold )
နဲ. လေစစ်ဘူး ( Air Filter ) တို.ကြားထဲမှာတပ်ဆင်ထားပြီး ကားမောင်းသူရဲ့ လီဘာနင်းမှုအပေါ်မူတည်ပြီး အင်ဂျင်ထဲကို မီးလောင် ပေါက်ကွဲဖို့ လေအနည်းအများ ဘယ်လောက်ပမာဏသွင်းမယ်ဆိုတာကို သူမှာပါဝင်တဲ့ Butterfly Valve တွေကို Regulate လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ် ။ 🚪ဒါက Throttle Body ( လေတံခါး ) ရဲ့ အဓိက တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့
ပုံစံပါ ။ ဒီလို တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လေတံခါး က လေမသန့်လို့ဖြစ်စေ ၊ အခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Throttle Body ( လေတံခါး ) ဟာ ချေးတွေဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပိတ်ဆို့သွားမယ်ဆိုရင် သူ ထမ်းဆောင်ရတဲ့ တာဝန်ဖြစ်တဲ့ လေအနည်းအများပမာဏထည့်သွင်းခြင်းကို အတိအကျမလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ဘဲ အညစ်အကြေးပိတ်ဆို့မှု အနည်းအများ ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ကားမှာ အောက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာ ပါမယ် ။ 📌၁။ စက်နှိုးရကြာမယ် ၊ စက်နှိုးရာမှာ ပုံမှန်ထက် ကရိုင်းရှပ်လည်ပတ်ရနှုန်းတွေပိုများလာမယ် ။ 📌၂။
အင်ဂျင်အနှေးလည်ပတ်မှု အခြေအနေ ( Idle Speed ) မတည်မငြိမ်ဖြစ်မယ် ၊ အင်ဂျင်အနှေးလည်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုံမှန်မဖြစ်ဘဲ အတက်အကျ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပေါ်မယ် ။ 📌၃။ အင်ဂျင်အနှေးလည်ပတ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ လေတံခါးအတွင်းပိတ်ဆို့နေတဲ့ချေးတွေကြောင့် အဖွင့်အပိတ်မမှန်ဖြစ်ပြီး လေယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ကာ စက်သေသွားမယ် ၊၊ ဒါမှမဟုတ် Slow Speed ဖြစ်သွားပါမယ် ။
📌၄။ အင်ဂျင်တုံ့ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်မယ် ၊ ဥပမာအားဖြင့် ကားမောင်းနေရင်းအကြောင်းတခုခုကြောင့် လီဘာကိုလျော့လိုက်တယ်ဆို
စက်ကတုံ့ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်သွားပြီး စက်သေချင်သလိုလိုဖြစ်တာမျိုး ၊ မီးပွိုင့်မိလို့ စက်ရှိန်လျော့လိုက်တာနဲ့ စက်သေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါမယ် ။ 🔧ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်
Throttle Body ( လေတံခါး ) ကိုဖြုတ်ပြီး လေတံခါးထဲက အညစ်အကြေးတွေ ဂျိုးတွေကို ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့လိုနေပါပြီ ။ လေတံခါးသန့်ရှင်းတဲ့ဆေးရည်တွေနဲ့ ဆေးကြောနိုင်သလို ၊ အများအားဖြင့် ဓာတ်ဆီနဲ့လည်းဆေးကြောနေတာတွေ့ရပါတယ်။ 🔌TPS ( Throttle Position Sensor ) 🌟လေတံခါးဆင်ဆာ
ဆိုတာက ကားမှာရှိတဲ့ လေတံခါးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို ကူညီထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အရာပါ ။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ လေတံခါးထဲမှာ ရှိတဲ့ Butterfly Valve တွေရဲ့အပိတ်အဖွင့်နဲ့တည်နေပုံတွေကို အာရုံခံပေးပြီး ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ 🌟မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာတော့
ECU (Engine Control Unit ) ကနေပြီး အာရုံခံစနစ်တွေ ၊ သတင်းပို့စနစ်တွေကို
အသုံးပြုကာ (ETC-Electronic Throttle Control ) စနစ်တွေအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် ။ 🌟တခြားလုပ်ဆောင်ချက်အနေနဲ့ကတော့
လေတံခါးဆင်ဆာတွေနဲ့ Automatic Transmission လို့ခေါ်တဲ့ အော်တိုဂီယာစနစ်တွေတွဲဖက်လုပ်ဆောင်ပြီး ဂီယာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကို ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း ပါပဲ ။
🌟 ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ဆင်ဆာတွေချို့ယွင်းပျက်စီးမယ်ဆိုရင် သင့်ကားမှာ အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါမယ် ။ 📌၁ ။ ကားအရှိန်တက်မှုနှေးကွေးမယ် 🔧ပုံမှန်အားဖြင့်
ကားတွေမှာ ကားလီဘာနဲ့ ကားရဲ့အရှိန်ဟာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေပါတယ် ၊ လေတံခါး ဆင်ဆာတွေကြောင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ သင်လီဘာနင်းရင်နင်းသလောက်ကားအရှိန်မြင့်တက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ။ သင်လီဘာကိုနင်းလိုက်တဲ့ အရှိန်နဲ့
့ကားရဲ့အရှိန်မြင့်တက်လာမှု ကွာဟာနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကားရဲ့ လေတံခါးဆင်ဆာတွေကြောင်နေပါပြီ ။ အထူးသဖြင့် ကားအရှိန်တက်လာပြီးမှ ရုတ်တရက်တုံ့ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်သွားတာမျိုးပါ ။ 📌၂။ ခဏခဏ စက်သေသေသွားခြင်း 🔧လေတံခါးဆင်ဆာမကောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့
ထင်ရှားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာကတော့ အင်ဂျင်စက်နှိုးကြည့်ထားချိန်နဲ့ မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန်နှစ်ခုလုံးမှာ ခဏခဏစက်သေသွားခြင်းပါ ။ အင်ဂျင်စက်သေသေသွားရခြင်းတဲ့ ရောဂါတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ပုံမှန်စက်ခဏခဏသေသွားတတ်ခြင်းက လေတံခါးရောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီး ပညာရှင်တွေက သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ 📌၃။ အရှိန်အလိုလိုမြန်လာခြင်း 🔧လီဘာကို
အရှိန်တခုရအောင် ပုံမှန် နင်းထားရာကနေ ကားအရှိန်တွေက ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အလိုလိုမြန်လာမယ် တိုးပြီး တက်လာမယ်ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒါလေတံခါးဆင်ဆာကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာရပ်ပါပဲ ။ 📌၄။ ဂီယာအပြောင်းအကူးပြဿနာ 🔧TPS
( Throttle Position Sensor ) တွေက လီဘာဘယ်လောက်နင်းတယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျသတင်းမပို့နိုင်ရင် သင့်အရှိန်အနိမ့်အမြင့်ကို အင်ဂျင်ထိန်းချုပ်စနစ်က သေချာမသိဘဲ ဂီယာအကူးအပြောင်းတွေပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ် ။ 📌၅။ Engine Check မီးလင်းလာတာ 🔧အင်ဂျင်ချက်မီးလင်းလာရခြင်းအကြောင်းအရာတွေ
များစွာရှိရတဲ့အထဲကမှ အပေါ်ကလက္ခဏာရပ်တွေလည်းဖြစ်တယ် Engine Check မီးလည်းလင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါ TPS ( Throttle Position Sensor ) ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ရောဂါ ပါပဲ ။ ဒီလိုရောဂါလက္ခဏာရပ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ OBD နည်းပညာများဖြင့်ပြစ်ချက်ရှာစစ်ဆေးပြီး စနစ်တကျပြုပြင်သင့်ပါတယ်။ 🚘🚘🚘🚘🚘 ကားချစ်သူ Credit》》 Prime Auto Technology